WS hybrid GRID UTHAYI inverter CTW-TLS-10KS / -20KS - China Ningbo Haitian Holding Group
WS hybrid GRID UTHAYI inverter CTW-TLS-10KS / -20KS
WS hybrid GRID UTHAYI inverter CTW-TLS-10KS / -20KS Wind hybrid solar igridi axhunywe amandla uhlelo kuhlanganisa PV Amamojula, umoya ephendulwa, isilawuli, alahle-umthwalo, inverter igridi axhunywe, amamitha namandla kuwukuphendula. I-PV amamojuli / umoya generator ukuguqula amandla emandleni DC. Khona-ke inverter igridi axhunywe DC amandla wave sine AC esesikhundleni imvamisa efanayo futhi isigaba nge grid voltage .I AC FEED-kugridi ngokwengxenye kanye nezinye ugesi imithwalo wendawo. I Advan ...
Umoya hybrid solar igridi axhunywe amandla uhlelo kuhlanganisa PV Amamojula, umoya ephendulwa, isilawuli, alahle-umthwalo, inverter igridi axhunywe, amamitha namandla kuwukuphendula. I-PV amamojuli / umoya generator ukuguqula amandla emandleni DC. Khona-ke inverter igridi axhunywe DC amandla wave sine AC esesikhundleni imvamisa efanayo futhi isigaba nge grid voltage .I AC FEED-kugridi ngokwengxenye kanye nezinye ugesi imithwalo wendawo. Buhle igridi-hlobo akuyona sokukhathazeka noma iyiphi imfucuza amandla, ngoba ngokuxhuma inverter-grid, kungasindisa yimuphi ugesi nemali esalayo nakulo nyakamali.
1. Ukusebenzisa IGBT kusukela Mitsubishi Inkampani njengoba izingxenye amandla.
2. Ukusebenzisa eziningi American ATEMEL microprocessors inkampani njengoba isibalo isilawuli.
3. Perfect Ukuvikelwa futhi isixwayiso imisebenzi.
4. MPPT (Amandla Point Tracking Maximum) ubuchwepheshe.
5. Ukuphazamiseka ubuchwepheshe, sifinyelele ukulawula Isiqhingi anti-ekhishwe inyumbazane.
6. Circuit Uhlaka compact, Max. Efficiency≥ 94%.
7. Insimbi steel igobolondo ngophawu hermetic manzi dustproof ekilasini IP65.
8.1150VDC okokufaka voltage anhlobonhlobo, Max. kuze kufinyelele 1150 VDC.
9. Ukuxhumana, multi zokuxhumana esibonakalayo ingakhethwa.
10. Pure sine wave okukhipha, ezivumelanisiwe ngokuzenzakalela ne kokulandela igridi, amandla isici eduze 1 yamanje okuqukethwe ongaphakeme harmonic, non-engcolisa amandla igridi, namthelela.
11. inverter zamanje ivaliwe-loop, amandla luyalawuleka.
12. Big isikrini Chinese / English LCD, ukubonisa ephelele, esibonakalayo-friendly.
13. Quick and lula ukufakwa, e ngokuvumelana nezindinganiso ka IEEE929-2000, AS4777 [kwezimvume SAA ngoba aus / New Zealand emakethe], Din V VDE V 0126-1-1: 2006, okuphansi Voltage 2006/95 / EC, EN 50178: 1998, G83-udaba 2: 2012, G59-udaba 3: 2013
Previous: WS hybrid GRID UTHAYI inverter CTW-TLS-6KS / -7KS
Okulandelayo: PV igridi iboshelwe inverter TLS1KTS ~ 4KTS
SPECIFICATION EZOBUCHWEPHESHE :
Max. DC Amandla wokufaka
Max. DC wokufaka Voltage
Kulinganiswe ngo-DC Voltage
Umoya: 100Vdc / Solar: 180Vdc
45.5A / 26,3 [3-isigaba]
66.6A / 40.0A [3-izigaba]
ukalwe AC okukhipha
yokusebenza ibanga Umbuso voltage
280-500VAC (ezintathu isigaba, 4wires)
yokusebenza ibanga Umbuso imvamisa
Ubude Harmonic inhlanekezela (THD)
Max. ukusebenza kahle
zero power ukusetshenziswa ebusuku
kagesi ukwahlukanisa izakhiwo
1500Vac, 1 iminithi
ukusebenza esikuyo lokushisa
ukusebenza esikuyo nomswakama
0-90%, akukho namazolo
Wokufaka phezu voltage, okukhipha short circuit, Ishisa, okukhipha DC ingxenye. Anti-islanding, phezu / ngaphansi voltage ka igridi, phezu / ngaphansi imvamisa igridi
ezinomsindo (ovundlile ibanga 1m)
amanzi ubufakazi futhi CLA dustproof
usayizi (W × L × Hmm)
Asikwazi ulungise ukucupha kanye nemingcele ngokuvumelana nemfuneko amakhasimende '.
Wind Ixhunyiwe inverter
Umoya Igridi Tie inverter
Wind Solar Hybrid Igridi Abopha inverter
PV igridi iboshelwe inverter TLS30KTS ~ 50KTS
MPPT umoya hybrid solar isilawuli WWS100A-120 / -...
Ezivamile Wind Igridi Tie inverter WG-CTW -30KVA3
WS hybrid GRID UTHAYI inverter CTW-TLS-2KS / -3KS
240VDC PWM solar icala isilawuli